Esports Basketball - Myanmar Sports
🎁 ESPORTS BASKETBALL 🎁
Esports Bonus Calender ရဲ့ Esports Basketball ပရိုမိုးရှင်းမှာ ပါဝင်ကစားပြီး
လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ကို စမ်းသပ်ပြီး Esports Basketball မှာ အလောင်းအစားထည့်ကစားခြင့်ဖြင့် ကြီးမား‌တဲ့ ငွေကြေးကို ရယူလိုက်ပါ။
ပရိုမိုးရှင်းကာလ ( 18. 05. 2022 – 19. 05. 2022 ) ( 03:30 – 03:29 )
ဒီပရိုမိုးရှင်းလေးကတော့ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၈ ရက်နေ့၊ မနက် ၃ နာရီ ၃၀ မိနစ် ( 18 May 2022 21:00 UTC ) ချိန်ကနေ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မေလ ၁၉ ရက်နေ့၊ မနက် ၃ နာရီ ၂၉ မိနစ် ( 19 May 2022 20:59 UTC ) ချိန်အတွင်းသာ အကျုံးဝင်ပါတယ် ခင်ဗျ။
၄။ အခု ကမ်းလှမ်းချက် ( Basketball 1xBet ) မှာ စာရင်းသွင်း (အကောင့်ဖွင့်) ထားသော ကတ်စတန်မာများသာ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းထားရပါမည်။
၇။ အခု ပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet basketball ) တွင် ပါဝင်ခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းသည် ကမ်းလှမ်းချက်၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို ဖတ်ပြီး လက်ခံကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။
၁၀။ ဒီပရိုမိုးရှင်း ( 1xBet basket promotion ) အတွက် အောက်ပါတစ်ခုစီတိုင်းလျှင် တစ်ကြိမ်သာ ရရှိနိုင်သည်။
၁၄။ ပရိုမိုးရှင်းရဲ့ စည်းမျဉ်းများ ( terms esports basketball ) ကို ပြောင်းလဲရန်၊ ပြိုင်ပွဲကို အချိန်မရွေး ဆိုင်းငံ့ရန် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းရန် ကျွန်တော်တို့ 1xBet ကုမ္ပဏီမှာ လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။